सेतो सारी लगाउने रहर |
सेतो सारी लगाउने रहर
प्रकाशित मिति :2020-04-20 14:09:32
दस वर्षको उमेर छँदै मभित्र एउटा सपना हुर्कियो- कवि बन्ने । यो सपना घटेन झनझन् बढ्यो ।
घर नजिकैको घना जंगल उबेला फाँडेपछि फेरि वन बिभागले वृक्षरोपण गरेको थियो । म दिनभर त्यही नर्सरीमा खेल्न अनि पढ्न जान्थे । त्योबेला देशमा भर्खर बहुदल आएको थियो । यहीबेला पथरीमा जंगल धेरै मासियो । जंगल मासिएपछि वन विभागले लगाएको सिसौको नर्सरी थियो, म त्यही नर्सरीमा दिनभर खेल्न र पढ्न जान्थे । सिसौको रुख र हरियो चउर । हरियो जंगल, खोला, गाउँको फराकिलो बाटो, पहाडको तेर्सो कुईनेटो खोला र त्यहाँ भेटिने साना साना माछा हेरेरै घन्टौं बसिरहन मन लाग्थ्यो । नजिकै बगिरहेको पथरी खोला नजिकको भुल्के पानीको कुवा सबै त थियो मलाई खेल्नलाई ।
किन किन त्यो चउरप्रति गहिरो लगाव थियो मेरो । चैतको गर्मिलो तराई । पातसम्म नहल्लिने । अचानक हावाले ल्याएको चिसो बतास र सिसौको पातसंग खेलिरहेका रङ्गी बिरङ्गी पुतली मलाई साँच्चिकै रमाइलो दृश्य लाग्थ्यो ।
यसैबेला हो गोर्कीको आमा उपन्यासको पाभेलप्रति मेरो गहिरो अभिरुची बढेको । एकोहोरो मन पराए । त्यसपछि धेरै समयसम्म म पाभेलसंगको एकोहोरो आर्कषणमा रहिरहे । पाभेलकै सम्झनामा कति रात अनिदो बित्यो । अहिले त्यस्तो हुनु नि ……….. ।
आमासंग झगडा गर्दै मागेको पैसाले लक्ष्मी दिदीको पसलमा गएर थुप्पा खाएपछि मेरो दिन प्राय त्यही नर्सरीमै बित्यो । त्यैबेला हो “जेठासुब्बाको छोरी बिग्रिएर गई” भनेर टोलभरी हल्ला चलेको । नचलोस् पनि किन ? संगैको केटी साथीहरु काममै व्यस्त । म कतिसम्म अराजक भने यहीबेला हो सेतो साडी लगाएर कवि गोष्ठीतिर हिंड्न थालेको । छोरी मान्छेले लोग्ने मरेपछि सेतो साडी लगाउनुपर्छ भन्ने प्रचलनविरूद्ध मैले उबेला सेतो साडी लगाए । तर चर्चा हुन्थ्यो विमलाले किन सेतो साडी लगाएको ? घरबाट बाहिर निस्कदा मान्छेहरु भन्थे “कलिलै उमेरमा नानी बिधुवा भैछिन्” तर म अविवाहित भएको थाहा भएपछि चकित हुन्थे । त्यसपछिका दिनमा नै हो सेतो सारी लगाएको कारण मैले धेरै कुरा सुन्न परेको । तर मैले अरुको कुरा सुने पो ।
म कति जिद्दी भने अब त झन् सेतो साडी मात्र होईन, कुर्ता सुरुवाल पनि सेतै लगाउथे । तर मसंग अरु पनि कपडाहरु त थिए नि । तर सधै सेतै लगाउथे । बुबाले पेन्सन थापेको दिन कि कपडा ल्याईदिने, कि एक सय पक्का दिने । हरेक अंग्रेजी महिनाको एक तारिख बुबाले पेन्सन थाप्ने । तर दशैँ मेरो आउने । उबेला भर्खर रंगिला फिल्म आएको थियो । उर्मिलाले लगाएको रंगीला बुट फेशनमा थियो । झगडा गरेरै त्यो रंगिला बुट बुबालाई किनि मागेको थिए । त्यसपछि बुट र वान पिस जामा लगाएर कविता भन्न मोरङको सुन्दरपुर कवि गोष्ठीमा गएको त्यहाँ त एउटा कविले रङ्गिला बुटकै कविता भनेपछि म लाजले भुतुक्कै भएको थिए । अहिले पनि सम्झिदा यस्तो लाग्छ- लाज लुकाउने ठाउँ हुन्नरहेछ ।
घरसम्म आउन मलाई कति सकस भएको थियो भने त्यसपछि मैले कहिले त्यो बुट लगाईनँ ।
बाहिर सेतो साडी लगाउने कवि भनेर चिने पनि खासमा भित्री रुप अर्कै थियो मेरो । भागेर फिल्म हेर्न जानु, ग्याङ फाईट खेल्नु , स्कुलबाटै उताउतै साथीहरुसग जंगल गएर कुसुम टिपी खानु, स्कुलबाट भागेर पौडी खेल्न जानु यस्तो उपद्रोचाही दिनहुँ जसो नै गर्थे ।
पथरी बजार नजिकको कुनै खोला र पोखरी बाकी छैन मैले पौडी नखेलेको । आमाले अघिल्लो दिन जे गर्नु हुन्न भनेर सम्झाउने भोलिपल्ट म त्यही काम गरिछाड्ने । कति पल्ट त मेरै कारणले आमा बुबाको कुटाकुट नै हुन्थ्यो । अहिले सम्झिदा सन्तान भनेको पनि दुस्खकै कारणहरु मध्ये एक रहेछ । मैले उबेला घरमा दिएको तनाब लेखिसक्नु छैन । उबेला मैले अविवाहित युवतीले सेतो साडी लगाउन हुन्न भन्ने थाहा पाएपछि नै हो सेतो सारी लगाएको । तर घरमा कहिल्यै सोधेनन् सेतो साडी किन लगाएको भनेर । मैले भने अहिले बुझे, मलाई किन उबेला बिग्रेको छोरी भनिएको रहेछ । तर पनि ठिक छ मलाई कुनै गुनासो छैन ।
पथरी खोलाको किनारमा घण्टौं खुट्टा डुबाएर म डुब्न लागेको घाम हैर्दै बस्थे र सोच्थे एकदिन काठमाडौं गएर कवि बन्छु । त्यो बेला मध्यरातमा महेन्द्र राजमार्गमा दौडिरहेको मालवाहक ट्रकको एकोहोरो आवाज सुन्नैको निम्ति आधारातसम्म अनिँदो बस्नु त मेरो निम्ति लत जस्तै थियो । आज सम्झदा लाग्छ हो नि ती रातहरु नितान्त मेरा थिए ।
२०४१ सालमा आगो लागेर पहिलेका साना छाप्रोहरु सबै मासिएपछि नै हो बिस्तारै टिनका घरहरु बन्न थालेको पथरी बजारमा । नत्र त पोथ्राहरु जस्तै लाग्थ्यो पथरी बजार । उबेला पूर्वी पहाडबाट मधेस झर्नेहरुको गन्तव्य मोरङ र झापाका बस्तीहरु हुन्थे । पथरीमा बिहिबार र आईतबार गरि हप्तामा दुईपटक बजार उठ्थ्यो । आमाले दिएको एक रूपैयाँले पापड, बरफ र छाप्री कोला किनेर खादा पनि अझै चाराना गोजीमा बाकी हुन्थ्यो । त्यति चाराना पैसा फ्रकको गोजीमा बोकेर बजारमा देखाईने बादर नाच , ईन्द्रजाल अनि डाईस सबै सबै हेर्न भ्याईन्थ्यो । सम्झेर ल्याउदा बास्तवमा सुख र शान्ति पनि जीवनमा यही बेला नै खास भोगिएको रहेछ ।
उबेला खरभुजा खादै बजार घुम्नुको मज्जा नै बेग्लै । बजारदेखि दक्षिण भेगमा शनिश्चरे, अमरदह हुँदै बोर्डरसम्मैका सबैको बजार पथरी बजार नै हो । फेरि म पिङ भनेपछि हुरुक्क । आमासंग झगडा गरेर घरछेउमा ठल्किएर उभिएको सालको रुखमा पिङ लगाएपछि मेरो बास त्यसै । अहिले सम्झन्छु आमा र बुबाले सन्तानहरु मर्दा मर्दा एउटा बाचेको पिउसो पनि फेरि चिप्लीहाले भन्ने त्रास र मायाले नै मलाई यो किसिमको स्वतन्त्रता दिएको रहेछ । पछि आमा भन्नुहुन्थ्यो, “सन्तानको माया आफै आमा भएपछि मात्र थाहा हुन्छ । तैले पनि आफै व्याएपछि मात्र चाख्छस् ।”
म यतिबिघ्न स्वतन्त्र भएर बाच्न पाउनु लिम्बुकै छोरी भएर मात्र सम्भव भएको हो भन्ने मेरो बुझाई छ । लाग्छ कहिलेकसो मेरो आमाबुबाले मलाई आम छोरी जस्तो बनाउन नचाहेकै रहेछन् । नत्र त बुबाले मलाई सधै किन “कुटाई खाएर होईन, कुटेर आउनु परेको म बेहोर्छु” भन्नुहुन्थ्यो त । फाईट खेल्दा बुबाको यो कुराले खपिनसक्नु हिम्मत आउने । कस्तो भने चार चारजनासंग एक्लै फाईट खेल्ने भनेपछि सकिगो नि । बेलुका स्कुलबाट घर आईनपुग्दै तिम्रो छोरीले पिट्यो भन्दै आमालाई उजुर गर्नेहरु कोही न कोही हुन्थ्यो नै हरेक दिन जसो । तर मेरा साथीहरु दयान, दिवस, काजी अमिर रेणुका, सेतो मुना, रातो मुना, बबिता, राजेन्द्र ती सबै अहिले हङकङ छन् । राजिन्द्र मात्र कतार छ ।
घरछेउमा काईली दिदीको आमा बोजु हुनुहुन्थ्यो उबेला । साह्रै भाका हालेर लोक गीत गाउने । प्राय आमाबुबा बोजुहरु लोकगीत गाएरै रात बिताईदिने । बुबा पनि गीत गाउनचाहिँ खोज्ने तर स्वर नराम्रो । बरु आमाको राम्रो । हुन त बुबा पेशाले आर्मी तर देबकोटा, बम देवान र बैरागी काईलाको बारेमा भनिरहनु हुन्थ्यो । खासगरि देबकोटाले कोटलाई चिया खुवाएको सन्दर्भ । यी कुराहरु बुबाले रक्सी खाएकै बेला पनि भन्ने । सायद यही कुराहरु गहिरोसंग मनमा रह्यो । हुनसक्छ यी अवस्थाहरुबाट म कविताप्रति आकर्षित भएकी । अहिले सम्झिदा कता कता त्यस्तै लाग्छ ।
बुबाले नारायण गोपालको गीतको मर्मको बारेमा आमालाई सुनाउनुहुन्थ्यो । तर आमाले बुझे पो ! कहिलेकाही आमालाई “बुढी मेरो छोरीलाई जे गर्न मन लाग्छ गर्न दे । मर्दा मर्दा बाचेको बुटी जस्तो । म पनि युद्वबाट बाचेर आएको हुँ बुझिस ” भन्नुहुन्थ्यो । तर यस्तो भनाभनचाहिँ बुबाले मात्र होईन, आमाले पनि बुबालाई भनेको सुन्थे । “आखिर मेरो एउटा छोरी जसरी पनि पाल्छु ।”
सम्झन्छु – आमासंग झगडा गरेर लगाई मागेको त्यो पिङ अनि पिङमा मच्चिदै गाएको त्यो गीत पनि मात्र थाहा पाए मैले गाएको “चादनी रातको चन्द्रझै” भन्ने यो गीत राजा महेन्द्रले लेखेको रहेछ । तर उबेला यो गीत सबैको मुखमा झुन्डिएको थियो । अहिले सम्झिन्छु छक्क लाग्छ मेरो जिद्वीपनप्रति । जे गर्नुहुन्न भन्यो त्यही गर्ने मेरो बानीले मलाई कतिसम्म जिद्वी बनाएको रहेछ ! जस्तै हरेक दिन लाप्पा खेल्दै साझ घर आउनु । पानी देख्नै नहुने जस्तै भेलमा पनि पौडी खेली हाल्नु । कतिपल्ट त झण्डैले खोलाले बगाएर लगेको छ र। खोलासंग गासिएका मेरो किस्साहरु पनि कुनै दिन भन्नेछु । तर त्यसरी सेतो साडी लगाउने मेरो जिद्वी पछि पछि त पूर्वमा सेतो साडी लगाउने केटी भनेर चिन्न थाले । त्यसपछि धेरै वर्षसम्म मैले सेतो साडी नै लगाए । अहिले सम्झदा लाग्छ यो समाजसंग मैले सेतो साडी लगाउन जति बिद्रोह गरे, त्यो भन्दा ठूलो बिद्रोह त मेरो आमा बुबाले गर्नु भएको रहेछ- मेरो सेतो साडी लगाउने जीतलाई स्वीकार गरेर ।